China Steam sterilization Autoclave Retort ye sardines uye tuna caned chikafu chinodzosera Kugadzira uye Fekitori | Shenlong
Steam sterilization Autoclave Retort yemasardines uye tuna caned chikafu chinodzosera
Steam Retort / Autoclave ndeyekuomesa chikafu chekakani nehutsi hwakazara; saka kuti uwane yakanaka yekuparadzira kupisa, usati wapisa, unofanirwa kuve neiyo yekuvhenekesa maitiro. Steam retort inonyanya kuitirwa nyama yemumagaba, hove dzemumagaba, nezvimwe.
1.Redu retort / autoclave yakachengeteka:
Yedu retort / autoclave musuwo wakapindirana kuti uve nechokwadi chekuvharwa kwemusuwo.
Yese retort / autoclave muviri unoonekwa mune yedu yekuona mukamuri kuti uone kana iyo welding yakanaka.
Yakashongedzerwa neyekuchengetedza vharuvhu, kana kudzora kuine matambudziko, kunogona manyore kuvhura iyo yekuchengetedza vharuvhu kune yekubatsira kumanikidza.
Chinangwa chedu chinofanirwa kuve chekubatanidza uye nekuvandudza zvemhando yepamusoro uye kugadzirisa kwezvinhu zvazvino, panguva ino inogara ichigadzira mhinduro nyowani yekusangana nezvinodiwa nevatengi zveMassive Selection yeChina Industrial Commercial Steam Cooker Retort yeMeat Retort Pouch, Chinangwa chedu ndeche inobvumidza iwe kugadzira hukama hunogara kwenguva refu pamwe nevatengi vako kuburikidza nekwaniso yekutengesa zvigadzirwa.
Massive Selection yeChina Retort Sterilizer, Retort homwe, Kubva pane yedu otomatiki yekugadzira tambo, yakadzikama zvinhu zvekutenga chiteshi uye nekukurumidza subcontract masystem akavakwa mukati mainland China kusangana nevatengi yakafara uye yakakwirira chinodiwa mumakore apfuura. Isu tanga tichitarisira kushandira pamwe nevamwe vatengi pasirese kuita zvakajairika budiriro uye kubatsirana! Kuvimba kwako uye kubvumidzwa ndiwo mubairo wakanakisa wekuedza kwedu. Kuchengeta kutendeseka, kuvandudza uye kugona, isu tinotarisira nemoyo wese kuti isu tinogona kuve vebhizinesi vatinogadzira isu kuti tigadzire ramangwana redu rakanaka
Mhepo iri pasi pekumanikidzwa inopa huwandu hwezvakanaka zvekugadzirisa zvigadzirwa zve lacf mumidziyo yesimbi.
1, Icho chakanakisa svikiro rekupisa kupisa
2, tembiricha Its iri nyore yaidzorwa.
3, Iyo yekumanikidza yekumanikidza inodikanwa mune yekudzosera kuitira kuti ibudirire inodiwa yekugadzirisa tembiricha inoshanda kupokana-kuyananisa kumanikidza kunovakwa mukati memudziyo panguva yekugadzirisa.
4, Steam inogona kugadzirwa nyore nyore uye inochengeterwa kuitira kuti ishandiswe ipapo ipapo.
5, Iyo yakachengetwa simba chivakwa chemhepo inoita kuti ive yepamusoro yekudziya svikiro kana ichienzaniswa nemvura kana mweya-mhepo
Maitiro ekudziya kwemhepo anosanganisira zvikamu zvishanu: Kuburitsa inotonhora mhepo chikamu, Heating-up chikamu, Kubata chikamu, Iyo kumanikidza kudzikamisa chikamu, uye Kutonhora chikamu.
Muenzaniso 1200 * 3600 1500 * 5250
Vhoriyamu 4.5m3 10m3
Simbi ukobvu 5mm 8mm
Dhizaini yekugadzira 145 ℃ 145 ℃
Dhizaini Dhizaini 0.44Mpa 0.44Mpa
Kumanikidza Kwesimba 0.35Mpa 0.35Mpa
Mashoko SUS304 SUS304
Kambani yedu yakatanga kugadzira retort / autoclave muna 2004, isu tine anopfuura makore gumi echiitiko munzvimbo ino. Saka, iwe unogona kuvimba nehunhu hwedu uye nechikwata chedu.
Pashure: otomatiki mvura inokonzeresa kutapudza kudzora kwechikafu chemumagaba uye chinwiwa indasitiri
Zvadaro: Mvura Mvura Rudzi rweCanned Food Sterilization Retort